NAIROBI, Kenya – Iyadda oo ay soo dhowdahay waqtiga ay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka dib u bilaabeyso dhageysiga dacwadda badda, dowladda Kenya ayaa karaar-siisay qorsheyaasheeda ka dhanka ah ICJ.
Kenya ayaa qoraal ay u dirtay ururka Midowga Afrika waxay ku dooday in kiiskan uu yahay "mid si qoto dheer u saameynaya" amniga gobolka, dagaalka Al-Shabaab iyo joogitaanka ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, Kenya oo ku hungowday talaabooyin horey oo ay cadaadis ku saareysa xukuumada Muqdisho ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhawaaqay "fatwa" ku aadan gal-dacwadeedka badda.
Hasa ahaatee, inta illaa iyo haatan la xasuusan yahay marka kaliya ee uu baarlamaanka Soomaaliya soo qaadey dacwada oo ahayd November 2009-kii, waxay mooshin ku buriyeen is-afaradka "dhalanteedka ah".
ICJ oo xukunkeeda uu noqon doono mid ay "qasab tahay" in la fuliyo isla markaana aanan rafcaan laga qaadan karin ayaa dhageysiga galkan dib-u-bilaabeysa bisha September, waxaana kadib ay soo saareysaa go’aanka ugu dambeeya.
Dalabkaan ayaa imaanaya xili xiisada diblumaasiyadeed ee labada dal ay sii kululaaneyso.